musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Hezvino chikonzero nei uchifanira kuenda gorilla kutenderera ikozvino
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Uganda Breaking News • Akasiyana Nhau
Gorilla inofamba mu Bwindi
Gorilla Trekking ndeimwe yeakanakisa emhuka dzesango pasi rese.
Vanoda kufamba vari kuronga nzendo dzekuenda kuUganda, nzvimbo yakanakisa yekusangana nemakorira emakomo anonakidza musango.
Kazhinji gorilla dzemakomo dzinowanikwa munzvimbo mbiri dzakasiyana - Bwindi Isingapindike Sango muUganda neMakomo eVirunga zvakare kuUganda neRwanda, neDemocratic Republic of Congo.
Mukana wekuona gorilla remumakomo uri padyo ne98 muzana mune chero maviri epaki dzenyika dzegorila.
Kutarisa nyani huru munzvimbo yavo yepanyama inosimudzira zvishuwo zvevafambi. Rini Bwindi Isingapindike National Park yakapihwa seimwe yenzvimbo shanu dzekumusoro dzekufamba mushe pasirese neCNN muna2019, vazhinji vakafunga kuti yaive hype. Asi munyika ine chipo nemasikirwo, gorilla kufamba-famba ingori chidimbu cheaizi yechando.
Nekushanya kuri kumuka muAfrica, vafambi vangangodaro vari kuronga nzendo dzekuenda kuUganda, nzvimbo yakanakisa yekusangana nemagorilla emakomo anonakidza musango. Nendege dzekuUganda dzichitangazve bhizinesi, zviri nyore kwazvo kuenda kuUganda, nyika iri kutumbuka nezvinhu zvakawanda zvinoshamisa kuona nekuita.
Kana usati wafunga kuronga zororo kuti uone makorira emakomo, hezvino chikonzero nei uchifanira kutanga nekuronga yako inotevera gorilla safari.